पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गितबारे निर्णय गर्न लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बद्रि पंगेनीले बोलाए आकस्मिक बैठक ! «
पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ गितबारे निर्णय गर्न लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बद्रि पंगेनीले बोलाए आकस्मिक बैठक !
काठमाडौँ, ५ फागुन । गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा’बारे उठेका टिक्का टिप्पणीलाई सल्टाउन राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको आकस्मिक बैठक डाकिएको छ ।
पशुपती शर्माको उक्त गितले सामाजिक संजालसहित नेपाली राजनीतिलाई समेत तरंगित बनाएपछि उनको पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु आईरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका गायक बद्रि पंगेनीले आकस्मिक बैठक बोलाइएको जानकरी गराऊँदै सबैलाई धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बैठक केहि घण्टा अगाडीनै बसेर शर्माको उक्त गितबारे निर्णय लिने बताएपनि अहिलेसम्म कुनै जानकरी बाहिरिएको छैन ।